USamsun usungula i-8K QLED, kunye nodonga kunye netekhnoloji ye-8K HDR | Iindaba zeGajethi
UJordi Gimenez | | Umfanekiso kunye nesandi
Okwangoku oomabonakude banezisombululo ezimangalisayo ngokubala ubungakanani beepaneli kodwa oku kunokuhlala kuphucula umbulelo kubuchwephesha obutsha kwaye kunjalo ngeSamsung, entsha Iiphaneli ze8K QLED, kunye netekhnoloji yeWall kunye ne-8K HDR beza kuhlala.
Ude ube uphambi kwenye yeepaneli ezintsha ezisibonisa esi sisombululo se-8K, awunalo uluvo lwento enokwenziwa ngeethelevishini ezifikelela kwimida yokubonisa engazange ibonwe ngaphambili. Isamsung sele iza kubonisa ifayile ye- Iimpawu ezintsha ze-intshi ezingama-8 ze-QLED edibanisa isisombululo esona siphezulu kwimarike kunye netekhnoloji yokulinganisa yokuQeqesha okungeyonyani.
Ngale ndlela, kufanele ukuba kuthiwe xa umi phambi kwenye yezi paneli wahlukile ngokwenyani, ke imifanekiso abayenzileyo iyinyani kwaye ivumela abasebenzisi ukuba bayonwabele amava okujonga okungaphezulu kakhulu. Amagama kaSergio Foncillas, umlawuli weShishini lokuBonisa iVenkile kwi-Samsung Electronics acacile ngaphambi kokumiliselwa kwi-ISE:
Ngokwazisa i-8K kumboniso wentengiso, iinkampani zinokubonisa umgangatho womfanekiso ongenakulinganiswa nabaphulaphuli babo ngendlela ebengenakwenzeka ngaphambili. I-8 ″ QLED 82K Signage yenye yeemveliso ezininzi ezikhokelayo esizazise kwi-ISE kulo nyaka. Sijonge ukungenisa ishishini lokumamela kwilizwe jikelele kuzo zonke izicelo zorhwebo i-8K ekufuneka ibonelele.
Kwelinye icala zikwabonisa udonga
Uyilo olucekeceke olungenasiphelo, olungenasiphelo, olungenasiphelo esivumela iphaneli ukuba idibane ngobuqili kunye neendawo eziyingqongileyo kunye nokuba mncinci ngokwenyani. Inemowudi yokuma ekuvumela ukuba wenze ngokwezifiso isikrini ngakumbi ngokubonisa imixholo eyahlukeneyo enjengeefoto kunye nobugcisa kunye nokuthelekisa imvelaphi yokuncedisa indawo ekungqongileyo.
Le nguqulo iya kuba ngumbulelo omangalisayo ngenxa yokuba iphelele zinokulungelelaniswa kwaye zinokutshintshwa ngokobukhulu obahlukeneyo kunye nobungakanani ukusuka ku-72 "kuye kuma-292". Okwangoku, izakufumaneka kwihlabathi liphela kwikota yokuqala yalo nyaka kwaye siqinisekile ukuba le fomathi enkulu yesikrini iya kuba luncedo kwiinkampani kunye neendawo zokuhlala zodidi. Singatsho ukuba ikamva leepaneli selilapha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umfanekiso kunye nesandi » Isamsung isungula kwi8K QLED, kunye nodonga kunye netekhnoloji ye-8K HDR
Ungabonakali njani kwi-Intanethi kuWhatsApp